Bakka itti qixaattoon jijjiramoota waliin itti furu dandeessu qaaqa bana. Barbaacha milkaa'aa boodaa,qaaqa firriiwwan waliin bana,gatii firii galiinsa kallattiin akka man'eetti agarsiistu si eeyyama.
Kutaa kana keessatti,jijjiramoota formuulaa kee keessatti hiiku dandeessa.
formuulaa man'ee keessatti,wabii man'ee kan formuulaa qabatee galchii. wabii man'ee ammaa of keessatti qabata. Wabii man'ee sanduuqni barruu akka fayyadamuuf man'ee gara bira wardii keessa cuqaasi.
Gatii akka bu'aa haraatti argachuu barbaaddu ifteessi.
Wabii man'ee huundaaf man'ee galumsa ga'uuf Gatii sirreessaa barbaaddu qabatee ifteessi.
Suntuursi / Irraanessi
Qooqsi sajoo qaaqa gara hamamtaa dirree naqaatti hir'isa. Kanaafuu wabii wardii irratti mallatteessuuf ni salphata. Sajoon ofumaan sajoo birootti jijjirama. Sajoo Olaansi. Qaaqa hamamtaa isa duraatti deebisanii kuusuf cuqaasi.
Yeroo hantuuteedhaan barruu irratti cuqaastu qaaqni ofumaan xiqqaata. Akkuma ati qabduu hantuutee gad lakkiifteen, qaaqni bakkatti deebi'a akkasumas hangi wabii hantuutee waliin qindaa'e galmee keessatti godayyaa cuquliisaan shoolama.
Title is: Barbaacha Galchii